नेपाल लाइभ मंगलबार, माघ १४, २०७६, ०६:३५:००
एजेन्सी- तीन कक्षामा पढ्ने सायमाले आफ्नो कापीमा पेन्सिलले चित्र बनाइन्। दुई बालिका आपसमा हात समात्दै रोइरहेका छन्– चित्रमा यही थियो।
सायमा चित्र अझै बनाइरहेकी छिन्। चित्रको बालिकाका गालामा आँशु झरिरहेका छन्। त्यो आँशुलाई अझै गाढा बनाइरहेकी छिन् सायमा। उनी कमाठीपुराको सरकारी स्कुलमा पढ्छिन्।
सामाजिक कार्यकर्ता लतिका भन्छिन्‚ ‘यिनलाई आफ्नी आमाको अभाव खड्किरहेको छ।’
सायमा चित्र बनाइरहेकी छिन्।
अब उनी एउटा जन्मदिनमा मनाउने पार्टीको चित्र बनाउन थाल्छिन् - एउटा ठूलो केक‚ मैनबत्ती‚ उपहार‚ फ्यान र हँसिला बच्चाहरूले भरिएको कोठा।
अर्की सानी नानी पनि आफ्नो कापी खोल्छिन् जसमा मुटुको चित्र कोरिएको छ। एउटा लाइन कोरेर उनी मुटुलाई दुई भागमा विभाजित गराइरहेकी छिन्। यी दुई बच्चाले आफ्नो कापीमा जे बनाए ती चित्रमा कतै पनि घर देखिएन‚ न त कुनै घर वरिपरीका पर्खाल।
त्यो साँझ करीब ५० जना बच्चा मुम्बईको एउटा सेल्टर (आश्रयस्थान) मा आए। एक गैरसरकारी संगठन प्रेरणाले चलाएको यो सेल्टर, जहाँ यौनकर्मीका सन्तानलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेल्टरका कोठा झकिझकाउ छन्। भित्तामा क्रिसमसको सजावट देखिन्छ। एउटा ब्ल्याकबोर्ड छ‚ जहाँ एउटा सानो समुद्रको किनार पनि बनाइएको छ।
अर्कोतर्फ गुन्द्री र तन्ना ओच्छ्याइएको छ। नजिकै एउटा सानो शौचालय छ। एउटा भान्साकोठा पनि छ जहाँ यिनै बालबालिकालाई खाना बनाएर खुवाउने गरिन्छ। अहिलेसम्मका लागि यी बच्चाहरूको घर हो यो सेल्टर।
ती बच्चाहरूले साथमा स्कुल ब्याग र राति फेर्न कपडा लिएर आएका छन्। तर‚ उनीहरूका बाँकी सामान अन्तै छ। त्यो दुर्गन्धित कोठा‚ जहाँ उनीहरुका आमा छन्। यी बच्चाहरू यो सेल्टरमा आउन त आउँछन् तर धेरै समय बस्न पाउँदैनन्।
जिन्स र कमिज लगाएकी एउटी अधबैंसे आमा गल्लीबाहिर उभिइरहेकी छिन्। उनले रातो रङ्गको लिपस्टिक लगाएकी छिन् र अत्यधिक सजिएर आएकी छिन्।
लगभग ३ वर्षको उनको छोरो उनको साथबाट अलग्गिएर रुँदै–रुँदै सेल्टरतिर गइरहेको छ। उ आफ्नी आमालाई एकपटक पनि पछाडि फर्केर हेर्दैन‚ जसलाई आफ्नो काममा फर्कनुपर्नेछ। काम– पैसाको बदलामा शरीर बेच्ने ।
कमाठीपुराको गल्ली नम्बर ९ मा रहेको सेन्टरकी सुपरभाइजर मुग्धा भन्छिन्– ‘नयाँ बच्चा हो। यहाँ आउनैपर्छ भन्ने उसलाई राम्रोसँग थाहा छ‚ तर रोइरहेको छ। बिस्तारै–बिस्तारै बानी पर्छ। सबै बच्चाहरू सुरुमा यस्तै गर्छन्। यिनीहरूसँग कुनै विकल्प पनि त हुँदैन’
भारतको सबैभन्दा पुरानो रेडलाइट इलाकाको रुपमा चिनिने कमाठीपुरामा यौनकर्मीको धेरै कमाइ पनि हुँदैन तर भवनको जीर्णोद्धारको योजनालाई मध्यनजर गर्दै भाडा बढाइएको छ। अब धेरै कोठा पनि छैनन्।
यस्तोमा यौनकर्मी महिलालाई मुश्किलले बस्नु परेको छ। सानो कोठामा उनीहरूलाई खाट पनि छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक कोठामा ६–६ वटा खाट राखिन्छन्। तल उनीहरू खाना बनाउँछन् र खाटमुनी आफ्ना सामान राख्छन्।
ती बच्चाहरूले कोरेको चित्रमा घरको कुनै चित्र नभेटिनुको कारण नै यही थियो। यी साना बच्चाको बस्नलाई आफ्नो घर छैन। आफ्ना सन्तान भविष्यमा आफूजस्तो बन्नु नपरोस् भनेर आमाहरू आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउँछन्।
यिनीहरूको परिवारमा आमा छिन्‚ उनका सन्तान छन्। परिवारमा बुवा नभएकोमा चित्त दुःखाइ पनि छैन। यौनकर्मीहरू सँधै आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि सन्तानलाई जोड दिन्छन्। किनकि उनीहरूका अनुसार सबै पुरूष दुर्व्यवहार‚ विश्वासघात र शोषण गर्छन्।
एक त उनीहरूलाई रेडलाइट इलाकामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। जहाँ असुरक्षित वातावरण र घरको अभावका साथसाथै उनीहरूमाथि लागेको चरित्रहीनको दागलाई पनि झेलिरहनुपर्ने पीडा छ।
प्रायः मानिसहरू यौनकर्मीहरू एक असल अभिभावक बन्न सक्दैनन् भनेर मुल्याङ्कन गर्छन्। उनीहरूका अगाडि नैतिकताको कुरा सिकाउने गरिन्छ।
मिताली (बदलिएको नाम) का अनुसार उनको कोठामा जम्मा एउटा खाट छ। पुरानो कोठा छ‚ जहाँको सिँढी भाँचिएको छ। भित्ता पनि भत्किन लागेका छन्।
उनी कमाठीपुरामा आएको १५ वर्ष भइसकेको छ। श्रीमानको मृत्युपछि दुई सन्तानलाई पाल्न उनी आफ्नो माइत गएकी थिइन्। तर‚ उनका बा आमा अत्यन्तै गरिब थिए।
मिताली भन्छिन्‚ ‘आमा बा यति गरिब थिए कि हामीलाई खान पनि धौ धौ पर्ने गर्थ्यो।’
उनी यो ठाउँमा उनकै एक परिचित व्यक्तिको माध्यमद्वारा आएकी थिइन्। जसले उनलाई कसैको घरमा कुचिकारको काम लगाइदिने भनी विश्वास दिलाएको थियो। तर दुर्भाग्यवश‚ अरू झैं उनी पनि रेडलाइट इलाकामा पुगिन्।
पछि उनले गाउँबाट आफ्ना दुई सन्तानलाई पनि त्यहीँ नै ल्याइन्। उनले ती साना नानीबाबुलाई विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू‚ डे केयर सेन्टर‚ नाइट केयर सेन्टरमा भर्ना गरिदिइन्।
ती बच्चा आफ्नी आमालाई भेट्न दिनमा जम्मा दुईचोटीमात्र जान पाउँछन्। नाइट सेल्टरमा नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि र ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि स्कुल जानका लागि।
मिताली बिहान पाँचै बजे ब्युँझिन्छिन् र आफ्नो छोराका लागि टिफिन तयार गर्छिन्। अनि फेरि सत्छिन् र दिउँसो ब्युँझिएर फेरि आफ्नो छोराको लागि खाना बनाउँछिन्‚ जो हरेक रात खाना खाएर नाइट सेल्टरमा जान्छन्।
त्यसपछि मिताली आफ्नो कामका लागि तयार हुन्छिन्।
उनी भन्छिन्‚ ‘म मेरो छोराको लागि जे गर्न सक्छु‚ त्यो सबै गरिरहेकी छु। म पनि त एउटी आमा हुँ। आफ्ना बच्चा सबैभन्दा खुसी होउन् भन्ने रहर कुन आमामा हँदैन र? ममा पनि त्यही छ‚ जुन आम आमाहरूमा छ।’
तर‚ यहाँ काम गर्ने प्रायः सबैका सन्तानलाई सुरू सुरुमा आफ्नी आमाले पनि अरुका आमाले झैं काम गरेर कमाउँछिन् भनेर सोच्ने गर्छन्। केही समयपछि यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग हुन्छ। तर‚ भोगिइसकेको त्यो समयलाई बदल्न चाहेर बदल्न कहाँ सकिन्छ र?
मिताली भन्छिन्‚ ‘अब त मेरा लागि घर नै यही भइसक्यो’
उनका अनुसार छोरीलाई त्यहाँ राख्न अत्यन्तै कठीन छ। अचेल मिताली वर्षमा एक दिन आफ्नो गाउँ जान्छिन् र आफ्नी छोरीसँग भेट्छिन्।
मिताली सुनाउँछिन्‚ ‘मसँग केवल एउटा सानो खाट छ। तर यो नै मेरा लागि घर हो। मानिसहरू फुटपाथमा त जीवन कटाउँछन्। मेरो त बस्नलाई एउटै भए नि कोठा छ। मेरो छोरोलाई पनि थाहा छ कि उसले दिन–रात सेल्टरमा बिताउनुपर्छ। उसलाई यो पनि थाहा छ कि म उसको घर हुँ।’
मितालीले यी सबै कुरा गरिरहँदा उनको मुहारमा उदासीपन स्पष्टैसँग देख्न सकिन्थ्यो। सुरु–सुरुमा त उनी आफूलाई सम्हाली–सम्हाली बोलिरहेकी थिइन्‚ वर्षौंदेखि भोग्दै आएको विश्वासघातले प्रत्येक कुरामा सन्देह गर्न सिकाएको छ।
केही समयपछि उनी आफूले महशुस गरेको एक्लोपन र निराशाको बारेमा कुरा सुनाउन थाल्छिन्। उनीहरू यस्तो ठाउँमा बस्छन् जहाँ यौनकर्मीहरू आमा हुँदा पनि प्रश्न उठाउने गरिन्छ। उनलाई पनि ठिक यस्तै हुन्छ।
छोराको जन्मदिनका लागि उनी पैसा जम्मा गर्छिन् ताकि नयाँ कपडा‚ केक किन्न सकियोस्।
मिताली सुनाउँछिन्‚ ‘मेरो जिन्दगी त अब बर्बाद भइसक्यो तर म मेरो छोरोको जिन्दगी पनि यसैगरी बिग्रियोस् भन्ने चाहन्नँ। छोरोले आफ्नै बलमा केही नोकरी गरोस् भन्ने चाहन्छु।’
उनले पनि अरु यौनकर्मीहरूले झैं खाट भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ। उक्त खाटको एकपटक प्रयोग गरेको २० रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ।
मितालीका अनुसार उनको कोठामा कोही आउन चाहँदैनन्। त्यसैले उनलाई अर्कै खाट भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता छ।
धेरै महिलाहरू आफ्ना भिन्न–भिन्न कारणले गर्दा एक्लोपनको सामना गरिरहनुपरेको छ। जस्तो कि सही जीवनसाथी नपाउनु‚ स्वतन्त्रताका लागि तथा विवाहपछि आइपर्ने तिरस्कारबाट बँच्नका लागि यौनकर्मी हुनुपर्ने बाध्यता प्रायःको छ।
उनलाई लाग्छ– हरेक पुरूषले उनलाई शोषण र तिरस्कार गर्छन्। यसकारणले पनि उनी एक्लै बस्न मन पराउँछिन्।
यथार्थ त यो हो कि यौनकर्मीको कामलाई लिएर समाजमा मनोमानी ढङ्गले गरिएको मुल्याङ्कनबाट यौनकर्मीका सन्तानले समेत विद्यालय र समाजमा धेरै नै भेदभावको सामना गर्नुपर्छ।
बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद प्रदीप खद्योत । तस्बिर : एसियावनडटकम
नेपाल लाइभमा बिहीबार : टेप प्रकरणमा बाँस्कोटाको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्रीदेखि यती समूहका नवाङ् जेल चलानसम्म बिहीबार नेपाल लाइभमा प्रकाशित मुख्य समाचार शीर्षकहरू: ३० मिनेट पहिले
नेपाल लाइभमा बिहीबार : टेप प्रकरणमा बाँस्कोटाको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्रीदेखि यती समूहका नवाङ् जेल चलानसम्म ३० मिनेट पहिले